Casharka 34: Nalalka baabuurka (Lysen på bilen) | Somaliska Online Skolan
Casharka 34: Nalalka baabuurka (Lysen på bilen)
Casharkaan waxaan ku qaadaneynaa macluumaad la xiriira nalalka baabuurka. Waxaan eegeynaa nalka fuulka iyo kan caadiga iyo nalalka kale ee ku xiran baabuurka.
Naalka caadiga ah (Halvljus)
Sharciga wadooyinka waxa uu farayaa in uu kuu daarnaado nalka marka aad socoto. Inta badan waxaa la isla isticmalaa nalka caadiga ah (Halvljus) iyo nalka dhigashada (parkeringsljus). Balse waxaa jira nalal ay mamnuuc tahay in aad isku darto.
Lama ogola nalka caadiga ah iyo nalka ciiryaamada Halvljus + dimljus.
Lama ogola nalka caadiga ah iyo nalka maalinta Halvljus + varselljus.
Lama ogola nalka caadiga ah iyo nalalka dheeriga ah Halvljus + extraljus.
Lama ogola nalka ciiryaamada iyo nalka maalinta Dimljus + varselljus.
Nalka fuulka ah (Helljus)
Nalkaan waa midka ugu iftiinka badan ee baabuurka ku xiran. Waxaa la doonayaa in aad isticmaasho inta awoodaada ah marka ay mugdi tahay. Nalkaan sidoo kale waxa uu cawiri karaa wadayaasha kale. Xaaladaha xoose waa mamnuuc in aad isticmaaso nalkaan.
Marka aad cawiri karto wadayaasha baabuurka soo socota (Xitaa waxaa ku jira tareemaha iyo doomaha).
Marka aad ku dhowdahay baabuur kaa horeeya, darawalka ayaad ku cawiri kartaa muraaya haadka.
Marka wadadu ay leedahay nalal ku filan sida tabeelayaasha nalalka.
Uma baahnid in aad ka walwasho in aad cawirto dadka lugeynaya maadaama ay ka jeesan karaan nalka. Way haboontahay in aad shidato nalka fuulka marka ay dad wadada marayaan si aad si fiican ugu aragto.
Waxaa sidoo kale haboon in aad damiso nalka marka aad goynayso isgoysada maadaama aad cawiri karto wadayaasha goynaya wadada.
Marka aad la kulmeyso baabuurta waaweyn oo aad kula kulanto dalcadaha waa in aad damisaa nalka isla marka aad aragto nalalka sare ee ku xiran baabuurka weyn, sababtu waa in darawalka baabuurka weyn uu fadhiyo meel sare oo si sahlan uu u cawirmi karo.
Nalka fuulka waa in aad dib u daartaa isla marka aad la kulanto baabuurka. Marka aad ku leexanayso jiiro bidixda ah uma baahnid in aad damiso nalka fuulka maadaama uusan cawireyn baabuurka kale.
Nalalka fareejada (Blinkers (körriktningsvisare)
Fareejooyinku sida caadiga ah waa kuwa ku xiran gadaal, horey iyo geesaha. Waa in aad isticmaashaa.
Marka aad u leexaneyso midig ama bidix.
marka aad körfält-ka badalaneyso.
Marka aad kala jiireyneyso.
Marka aad marshabiyeediga ka dhaqaaqeyso.
Markasta oo aad baabuurka dhinac u leexineyso.
Waa in aadan fareejeyn marka aad dhiganeyso baabuurka geeska wadada maadaama wadayaasha kale ay u qaadan karaan in aad leexaneyso.
Fareejada digniinta (Varningsblinkers)
Fareejada digniinta waa in la isticmaalaa markii ay jirto xaalad degdeg ah sida marka baabuurku kaaga damo wadada. Marka aad baabuur jiideyso waxaa wanaagsan in aad isticmaasho fareejada ku xiran baabuurka la jiidayo, sidoo kale waxaa haboon in aad damiso marka aad leexan rabto si aysan u abuurin jahwareer.
Nalalka ciiryaamada (Dimljus (dimstrålkastare)
Nalalka ciiryaamada ee hore ku xiran waxay ka awood badanyihiin nalka caadiga ah ee baabuurka sidaa darteed waa wanaagsantahay in la isticmaalo marka ay ciiryaamo jirto. Balse lama ogola in aad isku darto nalka caadiga ah iyo nalka ciiryaamada maalintii.
Habeenkii waxaa la ogolyahay in aad isku darto nalka caadiga ah iyo nalka ciiryaamada haddii ay ciiryaamo jirto ama roob.
Nalka ciiryaamada ee dambe (Dimbakljus)
Nalka ciiryaamada ee dambe waa nal casaan ah oo xoog leh kaasoo loogu tala galay in wadayaasha dambe ay si fiican u arkaan baabuurkaaga marka ay ciiryaamo jirto. Nalkaan waxa uu cawiri karaa wadayaasha dambe sidaa darteed way haboontahay in aad damiso marka ay ku arkaan kuwa kaa dambeeya.
Nalka maalinta (Varselljus)
Nalkaan waxaa loogu tala galay in aad isticmaasho marka ay maalin cad tahay si baabuurka loo arko halkii aad ka isticmaali lahayd nalka caadiga ah (halvljus) balse baabuurta oo dhan kuma xirna nalkaan.
In aad isku darto nalka maalinta varselljus iyo nalka caadiga ah halvljus ama nalka ciiryaamada dimljus waa mamnuuc.
Nalalka dheeriga ah (Extraljus)
Nalalkaan waa kuwo lagu xiro baabuurka oo lagu siyaadiyo nalka fuulka (Waa nalalka soomaalidu u yaqaanaan isbootlayt). Nalkaan lalama isticmaali karo nalka caadiga ah.
Waxaa jira labo nuuc.
Kurvljus waxa uu iftiimayaa agagaarka baabuurka si aad si wanaagsan u aragto geesaha.
Fjärrljus – Waxa uu iftiimayaa wadada tooska ah.
Nalka dhigashada (Parkeringsljus)
Nalkaan waa in la isticmaalaa marka aad baabuurka dhigato ama aad istaagto goob uusan araga wanaagsaneyn. Nalalkaan waa kuwo aan batariga cunin oo daarnaan kara saacado badan baabuurka oo dansan.
Nalka dambe (Bakljus)- Waa nalalka dambe ee casaanka ah, si otomatik ah ayay u daarmaan.
Nalka bareega (Bromsljus) – Waa nalalka iftiimaya marka bareega la riixo.
Nalka reefiska (Backljus) – Waa nalka iftiimaya marka aad gadaal u baxayso.
Nalka taarigada (Skyltlykta) – Waa nalka iftiimaya taarigada baabuurka.
Qofka dharka madoow wata ee aan xirneyn reflekis (Mörka kläder utan reflex) waxaa laga arkaa 25 m marka uu kuu daaranyahay nalka caadiga ah halvljus. Marka uu kuu daaranyahay nalka fuulka ah waxaad ka arkeysaa 100 m.
Qofka xiran dharka cadaanka ah ee aan xirneyn reflekis (Ljusa kläder utan reflex) waxaa laga arkaa 60 m marka uu shidanyahay halvljus , ama 200m marka uu shidanyahay Helljus.
Qofka xiran reflekis (Med reflex) waxaa laga arkaa 125 m marka uu daaranyahay halvljus. Waxaa laga arkaa 300 m marka uu daaranyahay Helljus.
← Casharka 33: Culeyska, xamuulka iyo tareelaha (Vikter, last & släpvagn)
Casharka 35: Baaritaanka baabuurka (Besiktning) →
You must be logged in to post a comment.	Somaliska Online Skolan © 2013. All Rights Reserved.